Sarkaal Dawladeed Oo Dil Ka Badbaaday Iyo Xukuumadda Oo Ku Fashilentay Qisaasta Gacan Ku Dhiiglayaasha | Somaliland Today
← Xukuumadda Oo Difaacday Musharaxnimada Madaxweynaha Oo Mugdi La Geliyay Iyo Guddoomiyaha KULMIYE Oo Maanta Ka Hadlaya
Kalamaanka Wargayska Somalilandtoday Muxuu Ka Yidhi Shirka Ganacsiga Somaliland Ee Ka Dhici Doona London?? →
Sarkaal Dawladeed Oo Dil Ka Badbaaday Iyo Xukuumadda Oo Ku Fashilentay Qisaasta Gacan Ku Dhiiglayaasha
(SLT-Berbera) – Nin hubaysan ayaa shalay arroornimadii hore rasaas ku furay Guddoomiyaha Waxbarashada Gobolka Saaxil ee Somaliland, kaasoo ahaa isku day dil balse uu ka badbaaday.
Dad goob-joogeyaal ah ayaa sheegay in Ibraahim Digaale oo ahaa Guddoonka waxbarashada ee Gobolka uu rasaas ku furay Nin Macalin ka ah Dugsi waxbarasho oo ku yaalla Magaaalada Xagal oo dhinaca bari kaga beegan Berbera, kaasoo ay Guri wada joogeen.
Falka ayaa dhacay Hiirtii hore ee subaxnimada Axadda ee shalay, wakhti ku beegnayd markii salaada Subax loo kacayay.
Ninkan falka geystay oo magaciisa lagu sheegay Khayre, ayaa ciidanka Bilaysku gacanta ku soo dhigeen isla markiiba, waxaana loo taxaabay Xabsiga.
Sarkaalka la weeraray, ayaa waxay rasaastu kaga dhacday Bowdada Midig oo sida ay saraakiisha Caafimaadku sheegeen ay ka jiidhaysay xabbadu.
Ninka weerarka geystay ayaa la sheegay inuu wakhti sii horaysay sidan oo rasaas ugu riday Sarkaal la shaqeeya Hay’ad dhinaca Waxbarashada ka caawisa Wasaaradda Tacliinta ee Gobolka Saaxil.
Sida laga soo xigtay Saraakiisha Nabad-gelyada ee gobolka, toogashada hore ee uu ku kacay ayaan wax waxyeelo ahi ka soo gaadhin Sarkaalka uu weeraray.
Isku dayga dil noocan oo kale ah ayaa u muuqda mid salka ku haya ismaan-dhaaf Maamul ama shakhsi oo inta badan dhex mara dadka ka shaqeeya xafiisyada dawladda. Hase ahaatee waa dhacdadii u horaysay ee uu Macalin xabbad ku weeraro Maamulkiisii uu la shaqaynayay.
Dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa muddo saddex toddobaad uun ka dib ah, markii Magaalada Gabiley lagu dilay Taliyihii Saldhigga Booliska ee degmada Arabsiyo ee isla Gobolkaasi, kaasi oo aan ilaa hadda gacan ku dhiiglihii geystayna Maxkamadi ku xukuntay dil toogasho ah, hasa-yeeshee aan ilaa hadda lagu fulin.
Dilkaasi ayaa waxa ka sii horeeyay toogasho lagu dilay Abbaanduulihii iyo taliyihii hawl-gelinta ee guutada 17-aad ee ciidamada qaranka Somaliland ee deegaanka Qori-lugud, falkaasi oo dadweynaha reer Somaliland aad uga xumaadeen, laakiin ninkii fuliyey uu baxsaday, ilaa haddana aan gacanta lagu soo dhigin, inkasta oo la wariyey inuu ka baxay xuduudka Somaliland.
Dilalkan soo noqnoqdey oo u muuqda kuwo qorshaysan, ayaan ilaa hadda xukuumadda Somaliland u helin wax xal ah oo lagu baajin karo. Hasa-yeeshee Xukuumadda Somaliland oo hore u sheegtay inay qisaas ku fulinayso dadka jeelasha ku xidhan ee hore dilalka u geystay, taasi oo la aamisan yahay inay wax ka tari karto inay joogsadaan dilalka qorshaysan ee dalka ka dhaca.
Qodobbo uu wasiirka arrimaha gudaha Somaliland oo saaray horraantii sanadkan, ayuu ku sheegay sidan “In dadka wax dilay ee aan lagu heshiin in di”iyo la kala qaato la mariyo qiysaasta sharciga ah, In la fuliyo go’aamada garsoorka iyo maxkadamaha ee fulinta sugaya, in aan garab la siinin dambiilaha wax dila ama caadaystay markuu wax yeeleeyo qof islaam ahna beel dabada galiyo, waxaana lagu heshiiyey in dambiilahaasi wax gacana oo la siiyaa aanay jirin”
Laakiin, go’aamadaasi ayaan ilaa hadda aanay waxba ka fulin, taasina waata ka keentay inay soo noqnoqdaan dillalkan noocan ahi. Sidoo kale, arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli ay aad u shaac baxday inay jiraan hay’ado dawladda ka caawiya in dadka ku eedaysan dilalka inta ay jeelasha ku jiraan la siiyo dhaqaale.